Ukulawula izinambuzane | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukulawula izinambuzane
Ungasusa kanjani i-beetle ye-May
Ngokufudumala, ezweni kukhona izinambuzane eziningi ezahlukene. Iningi lazo liletha izinzuzo ezicacile: i-pollinate futhi ihlakulele izitshalo. Kodwa ezinye zazo zilimaza kakhulu kunokuhle. Phakathi kwezinambuzane ezinonya ezinjalo indawo ekhethekile ihlala nguKhrushka. Ukuze unciphise umonakalo obangelwa yi-beetle, udinga ukwazi ukuthi yiziphi izinyathelo zokuzivikela eziphumelelayo, futhi ziqondiswe izindlela zokubhekana nazo.
Indlela yokususa izintuthwane kusayithi
Abaningi, bebona intuthwane ehlathini, ningamnaki kuze kube yilapho ekhala. Izintuthwane ensimini zingabangela umonakalo ongenakuqhathaniswa. Lezi zinambuzane ziyizivakashi ezingahambelwanga emhlabeni jikelele, zivumelane kahle nezimo zezulu futhi zizala kahle. Izintuthwane zingaba imibala ehlukene, ezinobuthi noma cha, ezindizayo futhi ezijwayelekile.
Kungani ushiya ukuphuzi, ukuvikela i-lily ezifweni nasezinambuzane
Abalimi abaningi balima iminduze ezindaweni zabo. Uthando lwakhe ngendlela elula yokungazinaki nokunakekelwa okulula. Kodwa ungakhohlwa ngezici ze-agrotechnics yale mibala. Uma ubona izimo zokutshala nokunakekelwa, i-lily ngeke ihlupheke izifo noma izinambuzane. Izici zezimbali zommbali uLily - iyisitshalo esingapheli, kodwa ukuze iqhume njalo ngonyaka, kufanele uyihlwanyele njalo eminyakeni emithathu.
Izifo nezinambuzane ze-spathyphilum, kanjani ukuvikela "injabulo yowesifazane"
Abesifazane besifazane bayathanda kakhulu ama-Spathiphyllums, ngoba lezi zimbali azikho okhethweni, zingakhula endaweni evulekile futhi ngesikhathi esifanayo zisasajabulisa ngemifino eluhlaza nezimbali ezikhangayo. Kodwa konke lokhu kuzoqhubeka kuze kube yilapho i-plaque ye-pathogen noma esinye isifo sesifo sibonakala emaqabunga e-spathiphyllum, okumele athathwe ngokushesha.
I-Bubbleplay: ukufika nokukhathalela
Phakathi kwazo zonke izitshalo zokuhlobisa ezikhona, i-clade yesigqila yinto encane efuna ukunakekelwa, futhi ngokuvamile isetshenziswa njengomuthi. Ngezansi, sizofunda ngokuningiliziwe izinhlobonhlobo ezithandwa kakhulu kule shrub, izici zayo zokukhiqiza nendlela yokunakekela ipolisi yesinye. Ukuhlangabezana ne-bubbleplodnik ye-Bubbleplod iyi-shrub ye-ornamental, inzuzo enkulu okuyiyona ukukhula okusheshayo, ukuzithoba, kanye nokubukeka okukhangayo, okuphikelela kuyo yonke inkathi ekhulayo.
Iyini i-rutabaga ewusizo
I-Swede iyitshalo se-hybrid seklabishi ne-turnip, iSweden kubhekwa njengezwe lakubo. Lezi zitshalo zinezimpande ezinamanzi eziphuzi, eziluhlaza okwesibhakabhaka, esiyisihlobo sesithombo, isithombo kanye nazo zonke izinhlobo zeklabishi. Imithetho yokutshala i-swede Yini i-swede, isivele icacile, ake sithole amaphuzu asemqoka okutshala le mpande.
Rudbeckia unomphela: izici zokunakekelwa
I-Rudbeckia engapheli iyisitshalo esihle, esiqhakazile somndeni wakwa-Astrov. Ivela eNyakatho Melika. Imbali enjalo iyoba yinto enhle kakhulu kunoma yimuphi umbhede wezimbali, futhi ngisho ne-novice e-floriculture ingahambisana nemithetho yokunakekelwa. Uyazi? URudbeckia waqamba igama layo ngokuhlonipha izitshalo zezinsana zaseSweden, u-Olof Rudbek (owathola uhlelo lymphatic lomuntu) noyise.
Amahlumela aseBrussels: ukutshala, ukunakekelwa, ukuzuza
Kulesi sihloko, sizokufundisa indlela yokutshala kahle amahlumela aseBrussels. Ake sikutshele ukuthi inhlabathi kufanele ibe yiphi futhi ukuthi udinge kangakanani ukuphuza lesi sitshalo. Ngeke nje ufunde okuthile okusha, kodwa futhi ufunde amaqiniso ambalwa athakazelisayo ngeklabishi. Uyazi? UKarl Linney kuqala ngokwesayensi wachaza iklabishi, ebiza eBrussels ngemuva kwebalimi baseBelgium evela eBrussels.
Izimfihlo ze-salvia ekhulayo
Kulesi sihloko sizokhuluma ngo-salvia nezinhlobonhlobo zayo, sifunde ukuphindaphinda nokunakekela isitshalo. Sifunda indlela yokuqeda izinambuzane ze-salvia kanye nezakhi zokwelapha zalesi sitshalo. Uyazi? USalvia (uSalvia) ovela kwisiLatini uhunyushwa ngokuthi "ukukhuthaza impilo." Elinye igama le-sage ngu-salvia.
Izinyathelo eziyinhloko zokunakekelwa kwe-tradescantia
I-garden tradescantia yisitshalo esingapheli esakha i-shrub encane. Iziqu zesitshalo ekuqaleni kwenkathi yemifino ziqondile, bese ziwa. Amaqabunga angafinyelela kufinyelela ku-21 cm. Izimbali ze-Tradescantia zivame izimbali zemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza okwesibhakabhaka, okushesha ngokushesha.
Ukutshala nokunakekela abadalaberryberry abamnyama
Umndeni omdala unezinhlobo ezingamashumi amane. Esizindeni sethu, umdala omnyama uvame ukutshala. Kubhekwa njengezihlukahlukene ezihlobisa kakhulu, ngaphandle kwe-elderberry nombala osetshenziselwa izinhloso zokwelapha. Ukutshala okulungile kwe-elderberry Kusukela ezikhathini zasendulo, i-elderberry yayinganqatshwa ukunakwa, itshalwa eduze nendlu, yayikholelwa ukuthi i-elderberry yenza amabutho amabi.
Indlela yokuvikela "umuthi wama dollar" ezivela ezinambuzane nezifo
I-Zamioculkas iyinhle yokuhlobisa i-shrub emndenini we-Aroid. Lesi sitshalo esihlotshisiwe sokuhlobisa isihlahla esinomqhele omuhle kanye namahlamvu aluhlaza okomnyama. Kodwa emva kwesikhathi esithile ngemuva kokuba i-zamiokulkas isitshalwe emhlabathini ovulekile, amaqabunga ayo aphuzi. Kulesi sihloko sizobheka ukuthi kungani lokhu kwenzeka, futhi sibone indlela yokubhekana nale nkinga.
Amathiphu awusizo ekukhuleni ibhalsamu yangaphakathi
Enye yezitshalo ezithandwa kakhulu zasendlini, ezisekelwe isikhathi eside emafasiteleni ethu ezindlini nasezindlini zethu, ibhalsamu (kulokhu, okuhlukile kwegumbi). Ukunakekela le mbali akulula, kodwa usadinga ukwazi ukuthi ungayitshala kanjani, usakaze, uphinde ugeze ibhalsamu ekamelweni ekhaya.
Indlela yokubhekana nama-moles e-cottage yabo ehlobo
Yonke insimu ifuna ukugcina utshani bayo bunesimo esihle, futhi isivuno esivandeni siphephile futhi sizwakala. Kodwa uma ama-moles ngokuzumayo ahlezi kuwe, khona-ke azokwenza izimbobo eziningi futhi ashukumise futhi abhubhise zonke izithelo zomsebenzi wakho. Cabanga ukuthi yini okufanele uyenze uma i-molecule ikhiphe engadini yakho, nokuthi ungayibhekana kanjani nayo. Okuphawulekayo kokuphila kwe-molecule e-dacha.
Izinambuzane nezifo ze-yucca: ukuvimbela, izimpawu kanye nokwelapha
I-Yucca isitshalo esinothando sokushisa esikhula ezimweni zemvelo ngomiso oqinile futhi singashintsha sibe yisihlahla esikhulu. Kulula ukutshala lesi sitshalo ekhaya, kepha lezi zikhona izifo ezingalithinta, futhi kubalulekile kuzo zonke izilimi ukuthi zikwazi ukubhekana nazo. Izifo ze-Yucca: ukuvimbela nokwelashwa Isitshalo se-Yucca asikho isidingo sokudla okunomsoco komhlabathi kanye nokujwayela kokunisela, njengoba kungaphezu kokuswakama okuvame ukuholela ekubukeni kwezifo esitshalweni.
Izimfihlo zokutshala nokunakekela i-snowberry
Emgwaqweni, epaki noma egcekeni ungase ubone amahlumela aphansi ngamabhisikidi amhlophe ngesimo sebhola. Lesi sitshalo esingavamile sisho i-snowberry (iSyphoricarpus, Snowfield). Kungaba isici esihle sokuhlobisa esimweni sezwe, futhi ukunakekela akudingi ubunzima obukhulu. Ukukhethwa kwesayithi lokutshala i-snowberry Kuzo izimo nendawo yokufika i-snowberry ayinayo izidingo ezikhethekile.
Indlela yokunakekela ikamelo le-fuchsia
I-Fuchsia yisitshalo esingapheli esikhula emvelweni eNingizimu neMelika naseNew Zealand. I-fuchsia yangaphakathi iyisitshalo se-hybrid, inezinhlobonhlobo nezinhlobo eziningi. Utshalwe emasikweni iminyaka engaphezu kwengu-200, futhi abalimi bembali bayibiza ngokuthi "ilanga laseJapane" noma "ibhola". Ngaphansi kwezimo zemvelo, i-fuchsia ibukeka njengesihlahla esinezihlahla eziguquguqukayo.
Indlela yokubhekana nezinambuzane zama-orchid
Izitshalo eziningi ezingavamile namuhla zithandwa ngabalimi bezimbali. Ama-orchids awahlukile. Njengoba ukhethe isitshalo oyithandayo, okokuqala bahlola amaqabunga, amagatsha kanye ne-peduncle, bekhohlwa ukubheka phansi. Ukuletha ekhaya ibhodlela elinembali, umthengi uvame ukuletha izinambuzane ze-orchid ezisekhona emhlabathini.
Amathiphu aphezulu wokukhula kwe-Kislitsy
I-Oxalis noma i-oxalis (evela kulesiLatini. Oxalis - "omuncu") kungokwezihlobo zezitshalo ezingapheliyo zonyaka futhi ezingapheli zomndeni omncane. Ikhulile emoyeni, kepha i-oksijeni inesithakazelo esikhethekile ekhaya. Ibukeka buhle njengendlela yokuhlobisa, ngenxa yezimbali ezingafani kuphela, kodwa futhi futhi amaqabunga amahle kakhulu.
Inanatha ekhaya: inganekwane noma ngokoqobo?
I-Ananas isisitshalo esithakazelisayo sezitshalo ezishisayo emazweni ashisayo eNingizimu Melika. EYurophu, yaqala ukukhula ezindaweni zokugcina izithombo zokugcina izithombo, kudala izimo zezulu ezidingekayo. Kodwa ngomzamo omncane, i-ananas ekhulayo ingenziwa ngisho nasekhaya. Futhi emva kwesikhashana lesi sitshalo esithakazelisayo sizosimangaza ngokubonakala kwayo nezithelo.